Iingcebiso zokufundisa zabafundi beGrad: I-Liven Up Your Studies
Iingcebiso ezi-6 zokubambisa iingxoxo zakho
Abafundi abaninzi abagqibeleleyo baphumelela kwi-intloko yeklasini, okokuqala njengabancedisi bokufundisa kwaye kamva njengabafundisi. Nangona kunjalo, isifundo esiphelweni esiphelweni asifundisi abafundi ukuba bafundise njani kwaye akubona bonke abaqeqeshi babafundi bokuqala abafundisa njenge-TAs. Kunoko, abafundi abaninzi abafumana iziqu bafumana ukuba bafundisa iklasi yeekholeji ngokungenakukwazi ukufundisa amava. Xa sibhekene nomngeni wokufundisa nangona amava amaninzi, abafundi abaninzi bajika kwiindlela abaye bazifumana njengabafundi, ngokuqhelekileyo indlela yokufundisa.
Ukuqwalasela yindlela yemveli yokufundisa, mhlawumbi uhlobo oludala kunazo zonke lwemfundo. Unabalandeli bakhe abachasayo ukuba yindlela ehambelana nemfundo. Nangona kunjalo, le ntetho ayisoloko idla. Intetho enhle ayikho nje uluhlu lwamaqiniso okanye ukuphindaphinda kwakhona kwincwadi yeencwadi, kodwa intetho ephosakeleyo iyabuhlungu kubafundi kunye nomfundisi. Intetho efanelekileyo yiphumo lokucwangcisa kunye nokwenza uchungechunge lwezinto ezikhethiweyo-kwaye akumele lube lukhuni. Ngezantsi zikhona iingcebiso malunga nokucwangcisa iintetho kunye neeklasi.
1. Musa ukumboza konke
Ukukhusela ekucwangciseni iseshoni nganye kwiklasi. Ngeke ukwazi ukumboza zonke izinto ezibhalwe kwisicatshulwa uze unike ukufundwa. Yamkele loo nto. Yenza isifundo sakho kwizinto ezibaluleke kakhulu kwisabelo sokufunda, isihloko esivela ekufundeni ukuba abafundi banokufumana ubunzima, okanye izinto ezingabonakali kwisicatshulwa. Chaza kubafundi ukuba awuyi kuphinda uninzi lwezinto ezifundwayo, kwaye umsebenzi wabo ufunde ngokucophelela nangokugxeka, ukuchonga nokuzisa imibuzo malunga nokufunda kwiklasi.
2. Yenza iinqununu
Inkulumo yakho ingabonakali ngaphezu kwemiba emithathu okanye emine imiba ephambili , kunye nexesha lemimandla nemibuzo. Nantoni na engaphezulu kwamaphuzu ambalwa kunye nabafundi bakho baya kugxininiswa. Qinisekisa isigidimi esibalulekileyo sentetho yakho uze ususe izambatho. Nika amathambo angenalutho kwimbali elincinci.
Abafundi baya kufumana iingongoma ezifanelekileyo xa zimbalwa kwinani, zicacile kwaye zidibene nemizekelo.
3. Kwenziwe kwiChunks encinci
Ukuphulaphula iintetho zakho ukwenzela ukuba zenziwe kwiincinci ezingama-20. Yintoni ephosakeleyo ngetitshala ye-1 okanye yeeyure ezimbini? Uphando lubonisa ukuba abafundi bakhumbula okokuqala kunye neyokugqibela kwemizuzu eyishumi yentetho, kodwa incinci yexesha lokungena. Abafundi besikolo esiphantsi baba neengqwalasela ezincinci-ke zisebenzise ngokunjalo ukuseka iklasi lakho. Shintsha iigesi emva komzuzu omnye wee-20 kunye nokukwenza into eyahlukileyo: Phendula umbuzo wengxoxo, isabelo esifutshane sokubhala, inkcazo encinane yeengxoxo, okanye isombululo sokulungisa ingxaki.
4. Khuthaza ukuSebenza okuSebenzayo
UkuFunda yinkqubo eyakhayo. Abafundi mabaze bacinge ngezinto eziphathekayo, baxhumane, baxele ulwazi olutsha kwinto esele yaziwa, kwaye basebenzise ulwazi kwiimeko ezintsha. Kuphela ngokusebenza ngolwazi esikufundayo. Abaqeqeshi abaphumelelayo basebenzisa ubuchule bokufunda bokusebenza eklasini. Ukufunda okusebenzayo ngumyalelo ogxilwe ngabafundi obangela abafundi ukuba basebenzise izixhobo ukuxazulula iingxaki, baphendule imibuzo, bahlole iimeko, baxoxe, bachaze, baxubushe, bacebise, bacebe imibuzo yabo.
Abafundi banqwenela ukukhetha iindlela zokufunda ezikhutheleyo kuba zibandakanya kwaye ziyonwabile.
5. Phela imibuzo ejongayo
Indlela elula yokusebenzisa ubuchule bokufunda esebenzayo kwigumbi lokufundela ukubuza imibuzo engabonakaliyo, kungekhona ewe okanye akukho mibuzo, kodwa ezo zifuna abafundi ukuba bacinge. Umzekelo, "Yintoni ongayenza kule meko? Uza kuthatha njani ukuxazulula le ngxaki? "Imibuzo ekhangayo kunzima kwaye iya kufuna ixesha lokucinga, ngoko ulungele ukulinda impendulo (mhlawumbi ubuncinane imizuzwana engama-30). Ukunyamezela ukuthula.
Kunokuba nje ubeke umbuzo wemibuzo, cela abafundi ukuba babhale ngombuzo wokuqala kwiminyaka emi-3 ukuya kwemi-5, uze ucele iimpendulo zabo. Inzuzo yokucela abafundi ukuba baqwalasele umbuzo ngokubhaliweyo kukuba baya kuba nexesha lokucinga ngokuphendula kwabo kwaye bazive bekhululekile ukuxoxa ngeembono zabo ngaphandle kokwesaba ukulibala iqondo labo.
Ukucela abafundi ukuba basebenze kunye nomxholo wekhosi kwaye baqaphele indlela ehambelana ngayo namava abo kwenza ukuba bafunde ngendlela yabo, benze izinto ezibonakalayo zibe nengqiqo, ephakathi kwentsebenzo yokufunda.
Ukongezelela kwiinzuzo zokufundisa, ukuphulaphula intetho kunye nokuyifaka ingxoxo kunye nokufunda okusebenzayo kuthatha uxinzelelo kuwe njengomqeqeshi. Iyure kunye nemizuzu elishumi elinesibini, okanye imizuzu engamashumi amahlanu ixesha elide lokuthetha. Kwaye ixesha elide lokuphulaphula. Zama ezi zixhobo uze uhluke izicwangciso zakho ukwenza kube lula kuwo wonke umntu kwaye wandise amathuba okuphumelela eklasini.
Ngaba iMidlife nayo ibuyele emva kweSikolo seBanga?
Ukuqwalasela iSigqibo seMatriki eMbali?
Yiyiphi iSigqibo seMatitshala?
Kutheni ungazange Ufike kwisikolo seGrey? Mhlawumbi akusiwe, nguwe
I-MicroMasters: Ibhuloho phakathi kwesiGanga seBachelor kunye neSigqibo seMatriki
Yintoni ekumele ibuze ngexesha le-Admissions Gramissions Admissions
Eyona ndlela ihamba phambili neyona mibi kakhulu ye-90's Band Comebacks
Ukubiza ngezoBugcisa bakho nezoBuchule
ISinagogi yasePennsylvania ngoFrank Lloyd Wright
Isicwangciso soSifundo soLwazi oluNyuliweyo
Ziziphi Iingqungquthela Ezihle kakhulu zokubhukuda?
I-Iranian Revolution ka-1979
Igama leBhanki liba yiNoun
Surf Up! Nazi iikhompyutheni ze-Photobombs ezithandwayo kakhulu ezithathwa kwi-Beach
I-Chaka Khan I-Top Ten Hits Hits